Muxuu ka yiri Jose Mourinho kulanka Chelsea? – Gool FM
Lucas Torreira, Matteo Guendouzi iyo Josh Kroenke oo ugu waa weyn maanta wararka suuqa kala iibsiga ee kooxda Arsenal
Mohamed Salah, Philippe Coutinho iyo Bobby Duncan oo ugu waa weyn maanta wararka suuqa kala iibsiga ee kooxda Liverpool
Muxuu ka yiri Jose Mourinho kulanka Chelsea?
Liibaan Fantastic February 20, 2017
(Manchester) 20 Feb 2017 Tababaraha kooxda Manchester United ee Jose Mourinho ayaa ka hadlay kulanka kooxdiisu ay la ciyaari doonto kooxda Chelsea rubuc dhamaadka koobka FA Cup-ka.
Manchester United oo xalay 2-1 uga soo adkaatay Blackburn Rovers ayaa markale u safri doonta kooxda Chelsea oo dhankeeda ka soo adkaatay Wolves.
Jose Mourinho ayaa sheegay in Chelsea ay xooga saarayso koobka FA Cup-ka halka kooxdiisu ay xooga saarayso koobabka kale ee ay ciyaarayso.
Wuxuuna cadeeyay in Chelsea ay meel soo dhigatay horyaalka, koobka kaliya ee ay indhaha ku haayaana uu yahay FA Cup-ka, wuxuuna yiri isaga oo ka hadlay kulanka Chelsea:
“Ma jirto wax gooni ah oo aan ka dhahayo isku aadka, waxaa jira koobab badan oo ay tahay inaan ka fikiro halka Chelsea ay ka fikirayo kaliya FA Cup-ka kadib markii ay meel soo dhigatay horyaalka”.
“Waa inaan la ciyaarnaa Saint Etienne kadibna waa inaan ciyaarnaa Final-ka League Cup-ka kadibna waa inaan la ciyaarnaa koox kale koobka europa League, waa inaan u tartanaa sidii aan uga mid noqon lahayn 4-ta koox ee ugu saraysa horyaalka, waxaa jiro wax yaabo badan oo ay tahay inaan ka fikiro”.
“Chelsea waxay ka fikiraysaa kaliya FA Cup-ka waayo waxay ku guulaysteen horyaalka mana jirto koob kale oo ay u tartamayaan”.
“Kulanka Chelsea waxaa la ciyaari doonaa bil kadib, sidaas darteed ma doonayo inaan ka fikiro, waxaan u tartami doonaa sidii aan ugu guulaysan lahayn FA Cup-ka laakiin waxaan haysanaa 50% ku guulaysiga League Cup-ka”.
KAARTUUN: Gareth Bale oo door halyey ciyaaray kulankii ugu horreeyey dhaawicisii kaddib
Zidane oo daaha ka rogay wixii uu u sheegay Gareth Bale xalay.....?